Spy on Instagram - Landelela futhi uhlole imiyalezo ye-Instagram Direct & Media Shared
Instagram Spy App - Gcina iso kwi-Instagram Direct imiyalezo kanye nokuhlanganyela komphakathi
I-Instagram iyinhlangano ehamba phambili neyesikhulumi sekwabelana ngevidiyo ibe ngaphezu kwama-Instagrammers ayizigidi ezingu-700 lapho cishe amaphesenti angu-24 abika ukuthi ahlaselwa yi-cyber. I-TOS Spy App ikuvumela ukuthi ulandelele cishe yonke imisebenzi eyenziwe kuphrofayela ye-Instagram.
Landelela izingxoxo, amazwana, kanye nabalandeli nge-Instagram Spy App
TheOneSpy Software yokuqapha Instagram ikusiza ukuthi ulandelele okuthunyelwe ngakunye lokho okutholakele ekufuneni kwayo kwe-Instagram kanye nokuthandwa kanye nokuphawula kokuthunyelwe. Umsebenzisi angagcina amathebhu ezithombeni nakumavidiyo athola futhi athunyelwe nge-Instagram.
I-OneOneSpy Instagram Spy App Ivumela Umsebenzisi ukuthi:
Hlola ama-Instagram izithombe namavidiyo
Gada okuthunyelwe ku-Instagram feed
Yazi ukuthi ubani olandela ilitshe
Buka ukuthandwa namazwana kokuthunyelwe
Indlela Yokude Ukuhlola I-App Social Social nge-TOS Control Panel?
Uma usuvele faka isofthiwe ye-TheOneSpy instagram spy kudivayisi yakho eqondisiwe, uhlelo lokusebenza luzoqala ukulayisha izingxoxo ze-Instagram kwi-akhawunti ye-TOS ku-intanethi. Ukuze ungene ku-akhawunti ye-TOS, iya kusiphequluli sakho bese uthayipha cp.theonespy.com.
Ama-Feeds & Amavidiyo
Emva kokungena ngemvume kusuka ku-TOS Control Panel ngokusebenzisa iziqinisekiso zakho zokungena ngemvume ukuya kwimenyu engakwesobunxele bese uchofoze kwi-IM logs. Lokhu kuzokuholela ekugcineni kwekhasi lakho logijimi logijimi. Chofoza kumenyu ehlehlisayo ukusuka ngakwesokudla phezulu kwekhasi bese ukhetha i-Instagram Log. Uzobona konke okuphakelayo okuqoqiwe yi-TOS Instagram spy app ie imiyalezo eqondile, izithombe ezabelwana namavidiyo.
Yikuphi Ukuqapha Okumangalisayo Okunikezwayo Nge-App Spy App?
Okwenza Udinge i-TheOneSpy Instagram Spy App
Njengomzali, icala lihle kuwe qapha impilo ye-cyber yabasha bakho ukuqinisekisa ukuthi bahlala bevikelekile kusuka ku-inthanethi kanye nezihlukumezi. Ngu ukulandelela ama-akhawunti wama-Instagram wezintsha zakho ungaqinisekisa ukuthi bagwema ukuthumela izinto ezingafanele kusayithi futhi babelane ngezithombe zabo zangasese namavidiyo ukuze bangaziwa.
3 ngokusekelwe ku 9 amavoti
Uhlelo lokusebenza lwe-Instagram spy